नोर्जाङ स्याङदेनको राग रन्थरुमा
Published : August 12, 2010 | Author : प्रकाश थाम्सुहाङ
Category : Review / समिक्षा | Views : 877 | Rating :
All Literature | Contact Author
कवि तथा गीतकार भोगेनजीले हङकङबाट इमेल गर्नुभयो- "होइन हौ यति लामो समयसम्म कता हराइरहनु भएको ?" काठमाडौबाट पनि साथीहरू के गर्दै ? भनेर सोध्छन् । के गर्दै मतलब कुनै सृजनाहरू भयो कि ? सोधनी हो । साथीहरूलाई थाहा नै होला पुतली जीवन चक्र, लार्भा बाट प्युपाको चक्रमा पो छु कि - फगत अनुमान, यद्दपि धेरै साथीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ म कविबाट किसानमा रुपान्तरण हुनगइरहेको । आफूले रोपेको विरुवा फलफूल लाग्दा कस्तो विछिट्ट अनुभूति । कवि भीमदर्शन रोकाले त्यसै कविता लेख्न छाडेका होइनरहेछन् । उनको स्वीकारोत्ती थियो लेखनको आत्मसन्तुष्टी अरु थोकबाट प्राप्त गरिन्छ भने के लेखिरहनु ! नयाँ सालको प्रारम्भमा फेदेनका कवि साथीहरू भवानी तावा, सगुन सुसारा, प्रेम ओझा आदिसँग काब्यिक जमघट भएको थियो । उनीहरूसँगको गफगाफले होला कवितासँगको मेरो मोह फेरि जीवित भएको । अलि सरसंगत पनि चाहिन्छ कि क्या हो ? अनि ईलाम आएर सिधै कवि विमल बैद्यको घर हानिए । फेरि कविताकै कुरा भयो । अझ राम्रो पक्ष उनको नयाँ कविताहरू पनि सुनियो । कविता सुन्दाको आनन्द र वेगल सन्तुष्टी, यस्तो लाग्यो मेरो कवितासँगको सम्बन्ध पार्थक्य हुनै सक्दैन । हो केही समय कवितासँग मेरो दुरी थियो र सृजना पनि शुन्य प्राय । तर सदाको लागि म कविताबाट टाढा रहन सक्दिन । बिमलजीबाट केही कविताकृतिहरू पठनको लागि प्राप्त गरें । पाठक सही म कविताको नजिक रहन्छु सौँच्दै सधन्यबाद लिएँ । <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
ईलाम बसाईपछिको मेरो पहिलो अध्यन कवि नोर्जाङ स्याङदेनको राग रन्थरुमा कविता कृति हो, जुन मेलै बिमलजीबाट प्राप्त गरेको थिएँ । ल्याएर यसो पल्टाई हेरेँ । बानी अलि छुटेछ । कृतिको शिर्षकले नै म त अल्मलिएँ । नोर्जाङ स्याङदेनको नाम त सुनेकै थिएँ । धेरैले आफूलाई मन पर्ने कविको नाममा उनको पनि लिएको थाहा थियो । राग त बुझियो, रन्थरुमा भनेको के होला ? यसो गम खाएँ । अँह फिट्टकिै अर्थ थाहा भएन । शब्दकोश पल्टाउने पनि जाँगर चलेन । अनि कविको भनाईमा उल्लेख छ कि सोच्दै प्राक्कथन पढन थालेँ । अहँ यहाँ पनि छैन । रन्थरुमा के होला ? यसको अर्थ ब्यापकता कति होला ? होइन हौ, कविहरूले यस्ताशब्दहरू राखेर पाठकहरूलाई रिङग्याउन खोजेकै हुन् ? कि रन्थरुमा कुनै युवतीको नाम हो जो सागीतलाई असाध्यै माया गर्छे । खोई केहो केहो ?
कतिपय कविताहरूमा राग शब्दलाई आध्यात्मिक दृष्टिकोणको अर्थमा तृष्णा लिईएतापनि राग रन्थरुमाको रागलाई भने शान्त, ब्यवस्था (order) को अर्थ दिइएको छ भने रन्थरुमालाई अस्तब्यवस्था (chasos) को अर्थमा । अझ बृहतर परिप्रेक्षमा रागलाई सुर, सुन्दरता, कोमलता, उज्यालो, हर्ष एवा सृजनात्मक गतिशीलताको विशाल अर्थमा लिइएको छ भने रन्थरुमालाई बेसुर, असुन्दर, पाषाण, अध्याँरो, अमषा एवा वैपरीतिक अवस्थितिमा देखिएता पनि वस्तुत यी दुवै अविभाज्य रुपमा सँगै कार्यात्मक हुँदा रहेछन् । - कविले त यस्तो अर्थदिएका रहेछन् रन्थरुमाको । कता कृतिको भित्र खोज्दो रहेछु, आवरणको बाहिरै कविले लेखेका रहेछन् । बुझेँ अलिअलि । राग रन्थरुमा विपरीत अर्थदिने शब्दहरू रहेछन् । अर्थात उज्यालो अध्यारो भने जस्तै । साँच्चि उज्यालो शब्द आउँदा मलाई चिन्तक आइ.बी. राईको भनाई याद आयो, उनले डेरिदाको दृष्टान्त दिदैँ धुलाबारीको एक गोष्ठीमा बोलेका थिए उज्यालो भने पछि अध्यारो पनि साथै जोडिएर आउँछ । कवि नोर्जाङले पनि राग र रन्थरुमालाई सम्भवत यसरी नै प्रयोग गरेका हुन् ।
यो प्रत्येक मान्छेको खुट्टामा गह्रौं साङलो जस्तो
बाँधिएको छ ।
- नोर्जाङ स्याङदेन
नेपाली भाषामा लेख्ने भारतीय कविहरूका केही कविता मेलै पढेको छु । ती कविताहरूको विषेशता भनेको कला र शैलीको उच्चता हो । अझ कला र शैलीमा निपुणता त सिक्कीमका कविहरूले प्राप्त गरेका छन् । तर दार्जिलिङ, आसामका कविहरूले वैचारिक सौंन्दर्यलाई अलि ज्यादा महत्व दिन्छन् । मनन गर्नु पर्ने कुरा यो छ कि त्यहाँ प्रान्तीय राजनीतिले गर्दा कविता लेखनमा पनि फरक परेको हो । सिक्कीमका कविहरू एक किसीमले ढुक्क छन् तर दार्जिलिङ,आसामका कविहरूले वेगल राजनैतिक लडाई लडिरहेका छन् । मतलब सामाजिक रीतिथीतिहरूले पनि कविता लेखनमा प्रभाव पार्दोरहेछ । सिक्कीमका कवि डा.राजेन्द्र भण्डारी र दार्जिलिङका कवि मनप्रसाद सुब्बाको कविताहरू सम्भवत यही कारण फरक फरक धारमा उभिएको छ । तर यता हाम्रो र उता सीमापारीको कविताहरू चाँहि अलि बेग्लै कारणले फरक छन् । नारायणघाटमा डा. राजेन्द्र भण्डारीसँग भेट हुँदा उनले भनेका थिए - नेपालबाट लेखिने कविताहरूमा राजनीति अलि हाबी भयो । यसले गर्दा कला ओझेलमा पर्यो । उनको मूल्याङन पनि ठीकै होला । तर उता र यताको राजनैतिक र सामाजिक धरातलमा आकाश जमिनको फरक छ । उनीहरू भारतमा समग्र नेपाली जातिको पहिचानको निम्ती लडिरहेछन् । हामी नेपाली जातिको बहुल सौंन्दर्य खोजिरहेछौं । फेरि गणतन्त्रको खातिर निरङ्कुशता बिरुद्घ लडेको कारणले पनि होला यताका कविताहरूमा विचार पक्ष हाबी भयो । हाम्रो राष्टियता फरक भएको कारणले पनि होला कविता निर्माण गर्ने सवालमा हामी बेगल रहेछौं । उदाहरणको लागि राग रन्थरुमामा समाविष्ट कवि नोर्जाङ स्याङदेनको यो कवितांश पढौं-
उसले आफ्नो घरको कोठामा
जय हिन्द भनेर लेखेको छ,पहेंलो रंङ चोबेर ब्रुसले
त्यस मुन्तिर मेरो भारत महान भनेर लेखेको छ
रातो रंङ दिएर आफनै हातले
जति बृहत छ उसको देश
त्यत्ति नै विशाल छ उसको हृदय ।
- एउटा राष्ट बोकेको सानो गाउँ
स्वाभाविक हो यस्ता कविताहरूको भाव नेपालका कविहरूलाई मन पर्दैन । तर नोर्जाङ स्याङदेनले त इमान्दार भएर यो कविता लेखेका हुन् । उनी भारत कै नागरिक हुन् । यसरी भाषा मिले पनि राष्टियताको फरकताले कविता पनि बेगल भयो । यसर्थ, भारतबाट आएर काठमाडौंलाई कर्म क्षेत्र बनाईरहेका अधिकाशं संगीतकर्मीहरूलाई भारतीय भन्दा चित्त नदुख्नु पर्ने हो । तर सिक्कीमका कविहरूले यस्तो कविता लेख्दा धुरन्धर समालोचकहरूले के भन्ने हुन् खोई ? लेण्डुप मार्ग कि राष्टवादी कविता ?
बहकिएँ कि क्या हो ? म त राग रन्थरुमा पढेर लागेको कुरा लेख्न खोजेको । लेख्न खोज्दा जोडिएर अरु थोक मिसीएर आएछ । हुन त मैले लेख्न पनि बिर्सेछु लागिरहेछ । अँ, राग रन्थरुमामा लामो छोटो गरेर ५३ ओटा कविताहरू समाविष्ट भएका छन् । कुनै त गीतहरू पनि हुन् जुन गीतको संरचनामा लेखिएका छन् । यो कृति सन् २००१ मा प्रकाशित भएको रहेछ । त्यो बेला अहिलेको जस्तो गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन चर्केको थिएन । चर्केर पनि सेलाएको थियो । फलस्वरुप राजनीति कविताको विषयबस्तु भएको छैन । राग रन्थरुमा कृति कुनै डा. विष्टलाई सर्मपण गरिएको छ । कृतिको पहिलो कविता "लेजण्ड" सम्भवत उनै विष्टको सम्मानमा कोरीएको हो । यसले उनलाई आम समाजको भन्दा ब्यक्तिको पक्षपोषण गरेको आरोप पनि लाग्न सक्ला । लेजण्ड किनारिएका आम मानिसहरू पक्कै बन्न सक्दैनन् होला । त्यसो त कविताको सौंन्दर्यलाई अनुभूत गर्ने आ-आफ्नै तरिकाहरू छन् । बुझाई आ-आफ्नै छ । यद्दपि, कविताले सामाजिक न्यायको पक्षपोषण गरोस् भन्ने मेरो चाहाना हो ।
एउटा युद्घको घोषणा गर्छौं
आङ तन्काएर अल्सीलाग्दो बिरालो जस्तो भएर
यी मान्छे, भगवानहरू
यिनीहरूलाई पनि कोइबेला एउटा भागदौड चाहिन्छ
एउटा ब्यस्तता चाहिन्छ
एउटा जोसिलो खेल चाहिन्छ ।
राग रन्थरुमाका कविताहरू हामीलाई अलि पृथक लाग्ने स्पेसको कारणले रहेछ । अर्को समाज,अर्को राष्टको कविले जीवनलाई कसरी बुझ्छ कौतुहल लाग्दो रहेछ । संसारभरिकै मान्छेहरूको संवेदना त साझा हुन्छ नै तर पनि केही स्थानीक निजत्वहरूले मान्छेको जीवनलाई फरक पारेको हुन्छ । राग रन्थरुमा भित्रको यस्तै स्थानीक निजत्वहरूले यो कृतिलाई नयाँपन दिएको हामीलाई आभाष हुन्छ । कविताको शब्द संयोजन पनि हामीलाई केही नौलो लाग्छ । ती शब्दहरू ब्याकरणीय रुपले शुद्घ वा असुद्घ के छन् त्यो त भाषाविज्ञले भन्ने कुरा हो । जस्तो-जलाएर आफ्नो वर्तमान जीवनको सिङ्घै बस्ती, म त तिमीमा आबाद हुँदछु । हुँदछु कि हुन्छु ? हुँदछु पनि शुद्घ हुन्छ कि । कि दार्जिलिङको बोली हो यो ?
राग रन्थरुमामा एउटा लामो कविता छ । उक्त कवितामा कविले नयाँ संरचनात्मक शैली वा छन्द बनाएका छन् । कवितामा प्रत्येक पद तीन पंक्तिका अनि प्रत्येक पंक्ति क्रमशै आठ, आठ र सात मात्राका छन् । जसलाई कविले नजल नाम दिएका छन् । जस्तो -
कुनै यात्रामा सरेको
कुनै डाँडामा झरेको
त्यो आकाश म सँग छ ।
- नजलका केही रंङ रेखाहरू
कवि नोर्जाङ स्याङदेन दार्जिलिङका चर्चित कवि हुन् । उनको चर्चा यता नेपालतिर पनि सुनेको हुँ । जे होस् दार्जिलिङमा उनी अघिल्लो पक्तिकै कवि हुन् लाग्छ । यही विविध कारणले उनमा कविता लेखन प्रति अधिक आत्मविश्वास देखिन्छ । उनको आत्मविश्वास हो कि आत्मरती ? यो चाहिँ पाठक र धुरन्धर समालोचकहरूले खुट्याउनु पर्ने भएको छ । प्राक्कथनमा उनी लेख्छन् - "मेरा कविताहरू राजा कविता हुन् । जब पनि मेरा कविता प्रकाशनको खुल्ला सडकमा सवारी हुन्छन् अरु कविताका भीडले बाटो छोड्दछन् अनि सडकका दुई किनारमा उभी मेरा कवितालाई अवाक् बनेर हेर्दछन् । मेरा कविताहरू शक्तिशाली छन्, तेजस्वी छन् ।" अझै निकै थोक लेखेका थिए सबै मैले उल्लेख गरिन । कुनै पनि कविमा आफ्नो कविताप्रति यस्तै विश्वास हुनुपर्छ कि क्या हो ?
आउने ए दिनहरू
फाटेको गुन्युले तिम्रो यौवन
छेक्न सक्दैन भने पनि तिमी नलजाई आऊ
- कुनै पनि नयाँ वर्षसित
कवि स्याङदेनको एउटा विषेशता भनेको सरल लेखन रहेछ । राग रन्थरुमाका अधिकांश कविताहरू सरल छन् । सरल भए पनि दिमाग रमरम पार्ने कविताहरू छन् । यर्सथ सतहमा होईन गहिराईमै पुग्नु पर्ने हुन्छ अर्थ ब्यापकताको लागि । तर एउटा पाठकको हैसियतमा मलाई कस्तो लाग्यो भने उनी कलामा चाँहि अलि चुकेकै हुन् । कि यता नेपालको कविताहरूको स्वादले मेरो दिमाग र हृदयको जिब्रो बिगार्यो । कवि स्याङदेनलाई मैले भेटेको, चिनेको छैन । यर्सथ एउटा पूर्वाग्रह राखेर कविता पढेँ भन्ने पनि होईन । हुनसक्छ डा. राजेन्द्र भण्डारी र मनप्रसाद सुब्बाका कविताहरूको स्वाद मैले अपेक्षा राखेँ । कि धेरै अन्तरालपछि पढेको हुनाले कविताको स्वाद बिर्सें ?
Visitor's Comments !
Please donot use offensive language.
[b]scriptsfrenzy[/b] isaweb designing [i]company[/i].
scriptsfrenzy isaweb designing company.
Enter the string shown.
Note : Currently user comments are not moderated and will be posted directly.
Most recent articles in Review / समिक्षा category
� "बलिहाङतङनाम मेरो मानसपटलमा" मेरो विश्लेषण
� जानु "काली"को जीवन भोगाईको "अनुभव"
� बगैंचा डट कमको श्रृजनशील साहित्य जलयात्राको कुरा
� गायक भिषण मुकारुङको
� हत्केलाको आगो ताप्दा
� स्व. लोकेश बोगटीको गीति एलबम
� क्यानभासमा कोरिएका कथाहरु
� गुत्थी सुल्झीन्छ की भयवादको ?
� अधिकार र नश्लीयताको जिकिरः सङ्गीनको मूर्च्छना
� कविता कृति “कुण्ठित मनका चित्कारहरू” एक बिचार
� कस्तुरी झैं नयाँघरे
� नारी चेतनाले सृजित युद्धको सपाट रुप
� “अन्तरमनको चित्र” हङकङको प्रथम गजल संग्रह
� कवि आठराईलीको 'कोसेली परदेशबाट'मा स्थानीयताको प्रयोग
� प्रतिसमालोचना सिद्धान्तमा पात्रहरूसँग एक साँझ
� 'अन्तर्मनको चित्र'मा समालोचना र आलोचना दुबै
� 'यात्रास्पर्श' पाठकीय अनुभूती
� जुनी जुनी गुन्जिरहने अन्तर्मनका तरङ्गहरू
तिमी पारी म वारी हिड्ने किनार बेग्लै भो
तिमी ऊँभो म ऊँधो तर्ने जंघार बेग्लै भो
कैल्यै पनि नहुनेभो भेट हाम्रो जिन्दगीमा
त्यो स्वर्ग र यो धर्तीको संसार बेग्लै भो
सधै ओठमा मुस्कान हुन्थ्यो सँगै हुँदा तिमी
नत रुनु न हाँस्नु आज मेरो मुहार बेग्लै भो